Top 10 ဝှက်ထားသော Spy အသံမှတ်တမ်းကိုအိမ်ထောင်ဖက်အားလှည့်စားခြင်းအတွက်စောင့်ကြည့်ခြင်း OMG Solutions
Monitor က cheat ကြင်ဖော်များအတွက်ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံးက Hidden SPY Voice ကို Recorder
ဒီကိစ္စဟာသင့်ကိုအပြည့်အဝသစ္စာရှိရှိသစ္စာရှိရှိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကိုရှာဖွေဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ သို့သော်သင်၏လက်တွဲဖော်သည်သင်၏အပေါ်သစ္စာစောင့်သိသည်ကိုမမြင်နိုင်ပါ။ မင်းသိချင်ရင်အောက်ဖော်ပြပါအသံဖမ်းစက်ကိုသုံးပြီးသင့်ကြင်ဖော်ကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးအမှန်တရားဆိုတာကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
SPYV018 - ဝေးလံခေါင်ဖျားသော SIM ကဒ်အသံစပိုင်ကိရိယာ -
မင်းတို့အိမ်ထောင်ဖက်ပြောတဲ့ဘာသာစကားနဲ့စကားပြောပုံကငါတို့တွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ သို့သော်ဤအချက်ကိုသေချာစေရန်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လုပ်ရပ်တိုင်းကိုသင်၏မျက်စိနှင့်သေချာစွာသေချာစွာ ထား၍ သင်၏အဖော်အနေဝေးနေသည့်တိုင်မည်သို့ပြောဆိုဆက်ဆံသည်ကိုအမြင်ရှိရမည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, SPYV018 သေချာပေါက်သံသယမရှိဘဲထွက်ရှိအဲဒီမှာအကောင်းဆုံးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ အခုဒီအရာသေးသေးလေးကဘာလုပ်လဲ။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်အသံအဖြစ်သာမကဗီဒီယိုများကိုဖမ်းယူနိုင်ပြီး 32gb အထိတိုးချဲ့နိုင်သော SD ကဒ်တွင်သိမ်းနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ရေစိုခံနိုင်မှုလည်းရှိတာကြောင့်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကညံ့ဖျင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ရင်တောင်မှထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ သင်စိတ်ရှုပ်စရာမလိုတော့ဘဲသင်ထုတ်ယူသည်နှင့်တပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သဖြင့်သင်အလွန်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ပုံမှန်အလုပ်များအတွက်သင်အလုပ်များနေစဉ်အတွင်း၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောအရာတစ်ခုခုကိုမစားခြင်းသို့မဟုတ်ပြinနာဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုပြုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောလူတစ် ဦး အားမျက်စိမှိတ်ထားရန်အိမ်၏မည်သည့်နေရာ၌ပင်သင်ထားနိုင်သည်။ !
SPYV022 - အသံမှတ်တမ်းမှတ်ပုံတင်ပါ
မျက်မှောက်ခေတ်ခေတ်သည်အဆင့်မြင့်။ ပိုမိုမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှသင်၏ကလေးများ (သို့) ချစ်မြတ်နိုးရသူကိုဂရုမစိုက်ဘဲသူတို့၏အမူအကျင့်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းသို့မဟုတ်သင့်ထံမှနှင်ထုတ်နိုင်သည့်တစ်စုံတစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး ၏လွှမ်းမိုးမှုမခံရရန်သေချာရန်ခက်ခဲလာသည် ။ အေးဆေးတည်ငြိမ်အောင်သူတို့မျက်လုံးထဲအမြဲရှိနေဖို့သေချာအောင်လုပ်ရမယ်။ သူတို့ကိုလွတ်လပ်စွာအပြည့်အဝခွင့်ပြုပြီးဖြစ်သော်လည်းသူတို့လက်ျာလက်၌သေချာနေစေလျှင်ကော။ SPYV022 သည်၎င်းအတွက်သင့်အတွက်သာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်စွမ်းအားကောင်းသည့်ဘဏ်အသံအသံဖမ်းခြင်းထောက်လှမ်းရေးကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 600 နာရီအထိဆက်တိုက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့်ဘက်ထရီနှင့်အတူကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသည်။ ဒါ့အပြင်၎င်းသည် 192kbps အမြန်နှုန်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခြင်း (သို့) စာရေးသားခြင်းကိုမြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်သင့်အားအရည်အသွေးပြည့်ဝမှုကိုသေချာစေပါတယ်။ Ilya 32gb built-in memory ကိုပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူပြီးနောက်မှာ SD card ကိုရှာရန်မလိုအပ်ပါ။
SPYV027 - ဖျောက်ထားသည့်အသံမှတ်တမ်း။
အခုသင်ဟာဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုသာကြည့်ရှုချင်တဲ့စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ချင်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်ကော။ SPYV027 ထက်ဤအရာသည်သင့်အတွက်သာဖြစ်သည်။ သင်ဤကိရိယာလေးကိုအခန်းတစ်ခန်း၊ အများသုံးနေရာဖြစ်စေမည်သည့်နေရာ၌မဆိုသင်ထားလိုသည့်နေရာတိုင်းတွင်အေးအေးဆေးဆေးထားနိုင်သည်၊ သို့သော်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပေါ်ထောင့်တိုင်းထားရှိကြောင်းသေချာစေရန်နှင့်၎င်းတို့အပေါ်ထားရှိသည့်သူတို့၏အပြုအမူများကိုကောင်းစွာသတိပြုမိနိုင်သည်။ အခြားလူများသို့မဟုတ်သူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆွဲနေသောလူများ! ဒီ gadget က 600 နာရီကိုတစ်ပြိုင်တည်းမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီးမည်သည့်အရာမှရှာစရာမလိုဘဲထိုဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်သို့မဟုတ် encode လုပ်နိုင်သည်။ ဒီထုတ်ကုန်ကို ၀ ယ်လိုက်တာနဲ့သင်တောင်းဆိုနိုင်သောသိုလှောင်မှုပမာဏကိုသေချာအောင်လုပ်ထားတဲ့ 8Gb မှတ်ဉာဏ်ပါ ၀ င်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်၏မျက်လုံးများသည်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမမြင်နိုင်သည့်တိုင်ယောက်ျားသို့မဟုတ်မိန်းကလေးအားမှားယွင်းသောလက်များသို့ ၀ င်ရောက်စေခြင်းအတွက်သင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ၎င်း၏ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရွယ်အစားကြောင့်ဝှက်ထားရှိနေဆဲနေစဉ်!
SPYV015 - MINI KEYCHAIN ​​အသံမှတ်တမ်းကို -
သင်၏ချစ်သူသည်မှားယွင်းသောလက်သို့ရောက်သွားသည်သို့မဟုတ်သင်၏ပုံမှန်အပြုအမူနည်းလမ်းများသည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်သူတို့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်ဟုထင်မြင်မိလျှင်သို့မဟုတ်သူတို့ကလူတို့နှင့်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည်ဟုခံစားရပါက၎င်းတို့သည်မဖြစ်သင့်ပါ။ ပြီးတော့စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒီ gadget ကတတ်နိုင်သမျှတိတိကျကျဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ SPYV015 သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်သင်ရှာဖွေနေသူတိုင်းကိုလက်ဆောင်ပေးရန်နှင့်သူတို့ပြောသမျှမည်သည့်အရာနှင့်မည်သည့်အရာနှင့်ပါ ၀ င်သည်ကိုအချိန်ပြည့်ကြားနာနိုင်ရုံမျှသာသောသော့ခတ်သောအသံချဲ့စက်အသေးစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာလူတိုင်းမှာကားရှိကြတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းတို့ဆီကဒီကားကိုဝယ်ဖို့သူတို့အတွက်ပြသနာမရှိဘူး။ ဒီ gadget ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်သူဟာဘယ်သူနဲ့ချိတ်ဆွဲနေတယ်၊ ​​ဘယ်သူတွေဝင်လာတယ်ဆိုတာကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အခြားလူများနှင့်သင်လက်လှမ်းမမီနိုင်သောအခါတိုင်းမည်သို့သောအပြုအမူမျိုးကိုသူတို့ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤပစ္စည်းသည် 28 နာရီကျော်ကျော်ဘက်ထရီညှိထားခြင်းဖြင့်သင်၏သော့ကိုနာရီအနည်းငယ်ကြာအောင်ထားရှိမည်၊ သို့မဟုတ်သင်ချစ်ရသူသည်ခလုတ်ခုံတွင်ရှိနေသောကားပြင်ပသို့ထွက်သွားလျှင်သင်ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ခဏလေး။ ၎င်းသည်လျှပ်စီးမြန်သောအချိန်တွင်လည်း 1 နာရီအတွင်းအားသွင်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းအတွက် socket မ်ားကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေရန်စိတ်မပူပါနှင့်!
SPYV003 - ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံမှတ်တမ်း။
အပေါ်ကပြခဲ့တဲ့ recorders တွေထဲမှာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားအပြင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဘက်ထရီသက်တမ်းကသင့်ရဲ့မှတ်တမ်းတင်မှုကိုမရပ်တန့်စေဘဲထူးခြားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ မှန်ပါသည်၊ SPYV003 သည်ခေတ္တရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲ 280 နာရီအထိမှတ်တမ်းတင်ထားသောအချိန်နှင့်အတူပါလာသည်။ သို့မှသာသင်ဤစက်ပစ္စည်းရှိသူမည်သူမဆိုလုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သို့မဟုတ်အခြားသူများနှင့်သူတို့မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်သေချာနိုင်သည်။ သူတို့ဒါပေါ်ပါဝင်ပတ်သက်လာပြီသူတို့လုပ်ရပ်များ။ သူတို့ကတစ်ချိန်လုံးအားသွင်းဖို့စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဒါ့အပြင်ဒီကိရိယာကိုအားသွင်းရန်ချိတ်ဆက်ထားသည့်တိုင်သင်၏ဗီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်ထိုနေရာ၌ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများအပေါ်သင်၏မျက်လုံးသို့မဟုတ်ထောင့်အကွာအဝေးကိုသေချာစေရန်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် USB ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်း။ ရသောကြောင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ၎င်းသည် pc နှင့် Mac တို့နှင့်လည်းသဟဇာတဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်အသုံးပြုသူကိုသင်အသုံးပြုပါစေဤစက်ပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုတည်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည် - တို့ထိ
SPY013 - အသံဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ပါ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်သိသည်အတိုင်း, သင်တစ် ဦး အစက်အပြောက်မှာဖြစ်ပျက်သမျှသောအဘို့မျက်စိထွက်ရှိသည်ဖို့စိတ်ချပါအခါတိုင်းသူကအများပြည်သူအစက်အပြောက်, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး ဦး စားပေးအခန်းတစ်ခန်းဖြစ်စေ။ သင်အသုံးပြုနေသောစက်သည်ပုံမှန်မျက်စိမှကင်းဝေးနေခြင်းသို့မဟုတ်ထိုရည်ရွယ်ချက်အတွက်အခြားအရာများနှင့်ရောနှောနေသည့်အရာတစ်ခုရရန်သေချာစေလိုသည်၊ အထူးသီးခြားဖြစ်သော SPYV013 နှင့်သင်သွားနိုင်သည်။ ဒီလှပလှပတဲ့ဒီ gadget ကဒီဟာကအပြင်ဘက်ကအရာတွေထဲမှာတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်တယ်။ .. ဘောပင်တစ်ချောင်းကိုရိုးရှင်းတဲ့ဘောပင်ကိုအသံဖမ်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး၎င်းသည်ဤကဲ့သို့သောမြင့်မားသောအရည်အသွေးများကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားလိမ့်မည်။ 20 နာရီကိုခေတ္တနားပြီးအသံသွင်းနိုင်ပါသလား။ ! ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့် 8 Gb မှတ်ဥာဏ်ပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ထိုစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသော 20 နာရီအတွင်းသိုလှောင်မှုကိုသင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ သင်ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဖြစ်စေ၊ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်စေလူတစ်ယောက်ကိုဖြစ်စေ၊ သင့်ကလေးကိုရှာဖွေနေရင်ဒီကိရိယာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သူတို့ကိုဤဘောပင်ကိုလက်ဆောင်ရိုးရိုးလေးသာပေးလိုက်ရုံသို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုသေချာစေရန်သူတို့၏အကွက်ထဲတွင်ထည့်နိုင်သည်။ သင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ဖြစ်စေသူတို့ပြောဆိုနေသည့်အရာများကိုအချိန်ပြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
SPYV009 - MINI USB သံမဏိ drive:
USB ကိရိယာများသည်အရာဝတ္ထုများကိုကွန်ပျူတာတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ရွှေ့ပြောင်းရန်အခက်ခဲဆုံးနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်ပေါ့ပါးပြီးသင်အားဂျင်းဘောင်းဘီထဲထည့်ရုံမျှနှင့်အာကာသနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲသင်နှင့်အတူမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုယူသွားနိုင်သည်။ အိတ်ကပ်! သို့သော် အကယ်၍ USB နေရာတိုင်းတွင်နေရာယူရန်တူညီသော USB ကသင်၏သိုလှောင်မှုကိုရော၊ မှန်ပါသည်၊ ဤနေရာသည် SPYV009 ဝင်ပေါက်ကိုလုပ်သောနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် USB pen drive ၏ပုံသဏ္toာန်ကြောင့်မည်သည့်အားကစားနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ပင်ရှိနေပါစေအသံဖမ်းစက်နှင့်ပြသမည်ကိုသင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ယနေ့ခေတ်တွင်လူအများစုသည်ကွန်ပျူတာပစ္စည်းများ၌ ၀ င်ရောက်နေကြသောကြောင့်၎င်းတို့တွင်၎င်းတို့တွင်တစ်ခုရှိရန်သေချာသည်။ သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူသို့မဟုတ်သင်လိမ်လည်နေသည်ဟုသင်ထင်သောခင်ပွန်းသည်သည်လည်းထိုအရာများလည်းရှိနိုင်သည်။ Bingo, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကိုသူသံသယရှိနေရင်သူဟာပုံမှန်အားဖြင့်သူမဖြစ်သင့်ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့အပြင်မှာရှိရင်သူတို့အပေါ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့သဘောထားရှိမှာမဟုတ်ဘူး၊ အရာသင်၌ပင်သူတို့ကိုမှာအားလုံးအနီးကပ်ဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲသူတို့ကိုအာမခံခြင်းနှင့်ထွက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ အရာအားလုံးကိုကင်မရာအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီးကင်မရာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာသေချာစေတယ် အားလုံးအသံသည်အသံသွင်းထားသောမိုက်ကရိုဖုန်းဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိနေသည်။
SPYV012 - ဆိုင်းငံ့ထားသည့်အသံမှတ်တမ်း။
ဒီနေ့ခေတ်မှာလူအများစုကသူတို့နှင့်အတူရှုပ်ထွေးခြင်းသို့မဟုတ်ပျော်စရာပျော်မွေ့နိုင်သောမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်ရှာဖွေနေကြသောကြောင့်ယနေ့ကမ္ဘာကြီးသို့ရောက်သောအခါမိန်းကလေးများသည်ထိန်းချုပ်ရန်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုအတွက်ပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်သူမနှင့်မပေါင်းသင့်သူတစ် ဦး နှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းကိုသေချာစေရန်။ ၎င်းသည် SPYV012၊ သင်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အသံအသံဖမ်းစက်ဟာလှပတင့်တယ်တဲ့မီးတောက်ငရဲတစ်ခုဖြစ်တယ်၊ သင်ကြည့်ချင်သောမည်သူမဆိုကိုလက်ဆောင်ပေးရုံမျှသာရိုးရှင်းစွာလှပစွာလက်ခံသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏လှပတင့်တယ်မှုအဆင့်အတွင်းမည်မျှလှပသနည်း။ ဤအရာသည်အားသွင်းစရာမလိုဘဲ5နာရီအထိဖြောင့်စွာမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဒီမှာနှင့်ထိုတွင်ပင် pinpoint talk ကိုဆုံးရှုံးသွားမည်ကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့် 8 GB သိုလှောင်မှုလည်းရှိပြီး၎င်းသည်မည်သည့်ရပ်တန့်မှုမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ရန်အချက်အလက်သိုလှောင်ရန်လုံလောက်သည်။ ၎င်းသည်နှစ် ဦး စလုံးပြုလုပ်သော၊ သင့်ကလေးကိုလုံခြုံစေရန်နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေပါစေသူတို့လက်ျာလက်၌သေချာစေရန်ပြုလုပ်သောလှပသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
SPYV020 - OMG BADGE ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံမှတ်တမ်း။
လူတိုင်းကသူတို့အမြဲတမ်းဝတ်ဆင်နိုင်သည့်သေးငယ်သော pin တံဆိပ်ခတ်တံဆိပ်များရှိခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အပိုင်းပဲဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်နေရာ၌ရှိနေပါစေကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ဤသေးငယ်သောသေးငယ်သောအရာများကိုသူတို့အားပေးကမ်းခြင်းကသူတို့ကိုရွှင်လန်းစေပြီးသူတို့၏တစ်နေ့တာကိုဖြစ်စေသည်။ ဒါပေမယ့်မင်းတို့မင်းတို့ရဲ့နေ့တွေကိုမင်းတို့နဲ့အတူမင်းတို့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာငါတို့ပြောခဲ့ရင်ကော။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ SPYV020 ဟာသင်ချစ်ရသူကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်း၊ သူတို့နှင့်မည်သူနှင့်ပေါင်းသင်းနေတယ်ဆိုတာကိုသင်အသေးစိတ်မသိနိုင်တဲ့အတွင်းပိုင်းအသံဖမ်းစက်တစ်ခုပါ ၀ င်လို့ပါပဲ။ ၎င်းသည်သင့်အားအစောပိုင်းအဆင့်များ၌အမြဲတမ်းသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထိပ်ဆုံးမှအမြဲတမ်းရှိနေခြင်းအားဖြင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောမိဘတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးရုံသာမကယင်းတို့ကိုဒုက္ခမှကင်းဝေးစေရုံသာမကအရည်အသွေးကောင်းသည့်မှတ်တမ်းတင်မှတ်တမ်းလည်းသေချာစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် WAV ၏ audio format နှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်ထားပြီး 8gb မှတ်ဉာဏ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ ၎င်းသည်အရာဝတ္ထုများကိုအလွန်အမင်းလိုအပ်သောအရာများနှင့်သင်တောင်းခံနိုင်သောသိုလှောင်မှုကိုသာထောက်ပံ့ပေးသည်။
SPYV027 - ဖျောက်ထားသည့်အသံမှတ်တမ်း
ဒါကတကယ်ကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ gadget တစ်ခုပါပဲ။ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ချင်တယ်၊ ပြီးတော့သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူပြောနေတာကိုပြောနေတာကိုကြားပြီးအရိပ်မှာရပ်နေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်မထင်ရသေးပေမယ့်သေချာအောင်လုပ်ရမယ်။ SPYV027 သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်နေသည့်အစွန်းသို့မဟုတ်သင်နှင့်သင့်အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုအမြဲတမ်းသေချာစေရန်ရူးသွပ်သည့်အရည်အသွေးအပြင်ဘက်ထရီအချိန်ကိုလည်းပေးသည်။ ဒီ sneaky gadgets တွေကိုရှောင်ချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင်ဒါကခင်ဗျားရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အခြားသူတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုသေချာစေပြီးလုံးဝမမြင်ရသေးတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ၎င်းသည်သင်၏အံ့သြဖွယ်ပါးလွှာသောဒီဇိုင်းကြောင့်အခြားသူများထံမှမျက်မြင်မရဖြစ်နေကြောင်းကိုလည်းအာမခံသည်။
4427 စုစုပေါင်း Views စာ 8 Views စာယနေ့တွင်